Iza no mpandresy lehibe tamin'ny Mobile World Congress? | Vaovao momba ny gadget
Iza no mpandresy lehibe tamin'ny Mobile World Congress?
Villamandos | | Events, About us
Andro vitsivitsy monja taorian'ny namaranan'ny Kongresy Iraisam-pirenena Finday, ary na dia mbola maharitra ihany aza ny faharetan'ny andro mahery amin'ny andro vitsy,fotoana hanombohana manao fehin-kevitra avy amin'ny vaovao rehetra hita tamin'ny hetsika. Ary noho izany, inona no fomba tsara kokoa noho ny manazava Iza no mpandresy lehibe tamin'ny Mobile World Congress? Araka ny azonao an-tsaina, sarotra be ny valiny ary vao mainka aza rehefa tsy hita eny an-tsena ny fitaovana marobe naroso tao an-tanànan'i Barcelona, ​​nefa tsy isalasalana fa hanandrana izahay.
Betsaka ny fitaovana hitantsika tao amin'ny MWC, na dia ambonin'izany rehetra izany aza dia afaka nilaza izahay fa ny LG G6, ny Huawei P10 amin'ny kinova roa izay ahitantsika azy, ny Galaxy Tab S3 sy ny Galaxy Book na ny Nokia 3310 vaovao. Tao Barcelona dia nahita fitaovana hafa maro karazana izahay, na inona na inona karazana, na dia tsy hitan'ny besinimaro aza ny ankamaroany, ary izahay saika afaka nilaza izany fa miankina amintsika, ary mazava ho azy fa tsy ho afaka hitsangana izy ireo miaraka amin'ny anaram-boninahitra mpandresy lehibe amin'ny Mobile World Congress.
1 LG dia mametraka ny hafainganana amin'ny LG G6
2 Nokia 3310, ny fiverenana amin'ny lasa
3 Huawei P10, fihodinanan'ny zavatra efa hita
4 Iza no mpandresy lehibe tamin'ny Mobile World Congress?
LG dia mametraka ny hafainganana amin'ny LG G6
Iray amin'ireo fitaovana finday nahasarika anay indrindra ny LG G6, izay aorian'ny fihemorana miverina fa ny LG G5 Toa ny hamoahana azy eny an-tsena vonona hanao ny zava-drehetra ary indrindra hanaloka ny iPhone 7 ary indrindra ny Samsung Galaxy S8 izay haseho amin'ny fomba ofisialy amin'ny 29 martsa ao New York City.
Ny efijery goavambe misy zana-kazo misy azy, ny fakantsariny manana kalitao goavambe sy endriny iray amin'ny maha-manintona azy indrindra dia manararaotra azy. Ankoatr'izay, ny vidiny izay hamoahana azy eny an-tsena, somary ambanin'ny finday avo lenta rehetra antsoina hoe ambaratonga avo lenta, dia mahatonga azy ho mpirotsaka hofidiana ho terminal farany tsara indrindra amin'ny taona, na dia mbola manana iray taona aza isika fampisehoana maro an'ny fitaovana finday vaovao.
Nokia 3310, ny fiverenana amin'ny lasa
Niverina eo amin'ny tsenan'ny finday i Nokia, miaraka amin'ireo finday avo lenta vaovao miaraka amin'ny rafitra fiasa Android ary misy famaritana samihafa, kendrena isaky ny elanelana eny an-tsena, ary koa miaraka amin'ny fanavaozana ny Nokia 3310 malaza, izay ananantsika rehetra saika isika rehetra amin'ny fotoana sasany amin'ny fiainantsika tsy ela akory izay.
El Nokia 3310 vaovao Niaritra fanovana lehibe sasany momba ny endriny izy io, saingy hiasa tanteraka ho terminal faharoa izy, manome antsika ny fahafahana miantso, mandray hafatra ary ahoana no tsy hilalaovana ny lalao bibilava angano, izay nanova kely momba ny ny kinova voalohany. Ny vidiny ihany koa no mahaliana indrindra ary izany dia ho an'ny 49 euro dia azontsika atao ny mankafy ity finday ity. Ho an'ny clueless indrindra, tadidinay fa ity fitaovana ity dia tsy hanana rafitra fiasa Android napetraka ao anatiny ary ho an'ity sy ny zavatra maro hafa dia tsy ho afaka hampiasa azy io ho finday avo lenta.
Huawei P10, fihodinanan'ny zavatra efa hita
Tsiahivina ny MWC amin'ity taona ity amin'ny fiverenan'i Nokia eo amin'ny tsenan'ny finday, fa koa amin'ny fanolorana amin'ny fomba ofisialy ilay vaovao Huawei P10, terminal vaovao avy amin'ny mpamokatra sinoa, izay miolakolaka amin'ny efa hita ary mitovy be izany Huawei P9 izay efa hita eny an-tsena.
Huawei dia iray amin'ireo mpanamboatra tsara indrindra eny an-tsena ary iray amin'ireo varotra avo indrindra koa. Ity Huawei P10 ity dia tsy isalasalana fa ho mpivarotra lafo indrindra, na dia maro amintsika aza no tsy mahita ny zava-baovao hafahafa. Ary io dia raha apetrakao ny sainam-pirenena roa farany an'ny Huawei hiatrika ny fahasamihafana misy vitsy dia vitsy.
Ny valin'ity fanontaniana ity dia hevitra tsotra, izay mety ho hafa ho antsika tsirairay avy izay nanaraka ny Kongresy Mobilw World. Raha ny amiko Resy lahatra aho fa i Nokia no mpandresy lehibe amin'ilay hetsika notontosaina tao an-tanànan'i Barcelona, izay rehefa avy tsy teo nandritra ny fotoana kelikely noho ny fivarotana ny fizarana telefaona finday tany amin'i Microsoft, dia niverina tany amin'ny tsenan'ny telefaona finday ary tsy isalasalana fa nanao izany tamin'ny varavarana fidirana.
Ny Nokia 3, Nokia 5 ary Nokia 6 no filohany lehibe amin'ity taona ity sy ny Nokia 3310 Ny fiverenany tamin'ny lasa, izay azo antoka fa ho afaka hametraka fakana vola an'arivony maro amina toerana marobe eran'izao tontolo izao izy, ary lamaody no lamaody.
Ny mpandresy tanteraka dia Nokia, saingy tsy isalasalana fa maro ny mpandresy amin'ny ambaratonga kely izay hametrahako LG, izay nahavita namerina ny tenany taorian'ny LG G5 ary namolavola finday avo lenta miaraka amin'ny lafiny tena tsara sy ho avy mampanantena. Energy Sistem miaraka amin'ny Energy Phone Pro 3, Huawei miaraka amin'ny P10 na Sony izay hanandrana indray miaraka amina fanangonana fitaovana finday vaovao mahaliana.
Ny Mobile World Congress 2017 dia efa tantara, ary ho an'ny tantara dia mety hijanona ho fiverenana eo amin'ny sehatry ny Nokia sy ny fampisehoana ny Nokia 3310, na dia tsy azontsika atao aza ny manadino fa izy io dia MWC somary voadona, indrindra noho ny tsy fisian'ny Samsung miaraka amin'ny Galaxy S8 sy koa noho ny tsy fisian'ny fanambarana lehibe na farafaharatsiny fanambaràna fitaovana revolisionera sasany izay hahatonga antsika rehetra ho lasa adala antsasak'adiny. Na tiantsika na tsia, ny tsenan'ny finday dia manjary monotonous ary tsy misy tsy ampoizina lehibe ary ny hetsika izay nifarana andro vitsivitsy lasa izay ary natao tao Barcelona dia nanaraka an'io fironana io.
Iza no nandresy tamin'ny fanontana farany ny Mobile World Congress ho anao?. Lazao anay ny hevitrao amin'ny toerana natokana ho an'ny fanehoan-kevitra amin'ity lahatsoratra ity na amin'ny alàlan'ny tambajotra sosialy misy anay.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » General » About us » Iza no mpandresy lehibe tamin'ny Mobile World Congress?
Ny Sony Xperia XZ Premium dia hamely ny tsena amin'ny 7 Mey